feature – iSeeMedia
9. 4. 2019 SATIRE (သရော်စာ) နိဗ္ဗာန်ရေငုပ်သင်္ဘော (ရှင်လူ) American Airlines လေယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ မျက်လုံးစုံမှိတ် မှေးစက်လိုက်ပါလာရင်း ရှင်လူကြီး အတွေးတခုကြောင့်ပြုံးလိုက်မိပေါ့။ တကယ့်အမေရိကန်တွေပဲ။ လူသားအရင်း အမြစ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်ကို ဘယ်သူမှလိုက်မီမယ်မထင်။ ခု..ကြည့်လေ NASA...
ဂီတဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်စေချင်တဲ့ ဉာဏ်လင်းအောင်
တွန်းအားဆိုတဲ့ Mini Album ကို ပရိသတ် လက်ထဲ ထည့်ပေးတော့မယ့် တေးသံရှင် ဉာဏ်လင်းအောင်က လက်ရှိ အခြေအနေတွေ အပေါ်မှာ အားရကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်…။ အခု သီချင်းအသစ်တွေပရိသတ်လက်ထဲထည့် ရတော့မယ်ဆိုတော့ အခွေမထွက်တာလည်း ငါးနှစ်လောက်ကြာပြီလေ…။ သီချင်းတွေအကုန်လုံးက Rock ကို အခြေခံထားပေမယ့်...
လူအများ ဝိုင်းကြည့်မည်စိုး၍ ကိုယ့်ထက် မချောတဲ့ သူနှင့်သာ ချစ်သူဖြစ်လိုကြောင်း သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းဆို
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော Wedding Show ကြီး၌ ဒီဇိုင်နာ ငြိမ်းကို Chic & Chic ၏ ဒီဇိုင်းများဖြင့် လှပနေသော သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်းကို တွေ့ဆုံခိုက် စိတ်ကူးထဲက ရည်းစားပုံရိပ်လေးကို...
မန်းတိုင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြည်သူများ မဲစာရင်းကြည့်ရှု့နိုင်ရန် ယနေ့မှစ၍ ကြေညာထား
ဇူလိုင် ၉ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးနိုင်မည့်ပြည်သူများ စာရင်းကို ယနေ့ဇူလိုင်(၉)ရက်မှ စတင်၍ ကြေညာထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သိရသည်။ “မဲစာရင်းကပ်တာက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းပါပဲ။ နှစ်ပတ်တိတိကပ်ထားပေးသွားမယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နောက်တစ်ချိန် ပြန်ကပ်ပေးသွားမှာပါ” ဟု...
ပန်းပိတောက်တွေ ရွှေရည်လူး ဖူးခိုက်ခိုက်ဝေ
လာမယ့် ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ် တန်ခူးလဆန် ၉ ရက်မှာ မဟာအတာသြင်္ကန်ကျပြီ။ မြန်မာတို့၏ နှစ်ကူးပွဲ ပိတ်ရက်ရှည်ကာလ ဆိုက်ရောက်လာတော့မည်။ စကရုံအလုပ်ရုံတွေ၊ ရုံးတွေကျောင်းတွေမှာ ပွဲတော်ရက်အတွက် စိတ်စောနေကြပြီ။ ဇာတိနယ်မြို့တွေဆီ ပြန်မယ့်သူတွေလည်း ခရီးအတွက်...
EDITORIAL (၂၈၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၈) တစ်ခါတုန်းကတော့ စစ်လမ်းကြောင်းကျခဲ့တဲ့ မြို့ကလေးဟု ပြောရမည်။ တခြားအရပ်ကလူတွေ ဒီမြို့ကလေးဆီ ဦးတည်လာရင်ပဲ သင်္ကာမကင်းသည့် မျက်လုံးတွေက ဒေါက်ထောက်ကြည့်ကြသည်။ ညဘက်ဆို မြို့ပြင်ဘက်က ပစ်သံခတ်သံတွေကို ကြားနေရသည်။ မြို့တွင်းမှာ လူစိမ်းဆိုလျှင် အရိပ်တွေက ကပ်ပါလာသည်။...